သင့်အရောင်းအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် စကားစုများ _အပိုင်း (၇) - Better Version
သင့်အရောင်းအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် စကားစုများ _အပိုင်း (၇)
February 11, 2022 2022-02-11 12:31
What Makes You Say That? (ဘယ်အရာတွေကြောင့်များ ဒီလိုပြောတာလဲ)
အငြင်းခံရတယ်ဆိုတာကတော့ အရောင်းသမားတွေရဲ့ ပုံမှန်ကြုံတွေနေကျ အဖြစ်အပျက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာ သုံးရမယ့် magic word တစ်ခုကတော့ “What makes you say that? – ဘယ်အရာတွေကြောင့်များ ဒီလိုပြောတာလဲ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစကားလုံးကို ဘယ်အချိန်မှာသုံးရမလဲဆိုရင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကများ မယူသေးဘူး၊ မ၀ယ်သေးဘူးနော်လို့ ပြောပြီး ငြင်းလာခဲ့ရင် ဘာကြောင့်ငြင်းရလဲဆိုတာကို သိအောင်လုပ်ဖို့ အတွက် အသုံးပြုသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ညှိနှိုင်းရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရောင်းပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဖက်လူရဲ့ ငြင်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုသိအောင် လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ တကယ့် အကြောင်းအရင်း အမှန်ကိုသာသိထားမယ်ဆိုရင် ငြင်းပယ်မှုကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို စဥ်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စကားဝိုင်းတစ်ခုမှာ မေးခွန်းမေးတတ်တဲ့လူက ပိုပြီးထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း သင့်တို့ရဲ့ ငြင်းပယ်မှုတိုင်းမှာ ထိရောက်တဲ့ မေးခွန်းမေးပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
၀ယ်သူတွေက ငြင်းရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အချိန်မရှိသေးလို့၊ အခုတော့မလိုသေးလို့၊ စဥ်းစားလိုက်ဦးမယ်နော်၊ ငွေကြေးအဆင်မပြေသေးလို့၊ စျေးကြီးလို့၊ တစ်ခြားလူနဲ့ တိုင်ပင်ဦးမှာမို့လို့ စသည်ဖြင့် အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးပေးပြီး ငြင်းတတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ ပြောတဲ့ အကြောင်းပြချက်က သူတို့ကတကယ်ငြင်းရတဲ့အကြောင်းအရင်းဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ အမ/အကိုတို့အနေနဲ့ ဘယ်အရာတွေကြောင့်များ ဒီလိုပြောတာလဲ ခင်ဗျာ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမေးပြီး ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်။
ဥပမာ ပြောရရင် ၀ယ်သူက စျေးကြီးတယ်နော်လို့ ပြောလာခဲ့ရင် အရောင်းသမားတွေအနေနဲ့ အကို/အမ အနေနဲ့ ဘယ်အရာတွေကြောင့်များ ဒီလိုပြောတာလဲခင်ဗျာ” လို့ ပြန်မေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ၀ယ်သူအနေနဲ့ သူဘာလို့ စျေးကြီးတယ်လို့ ထင်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုပြန်ဖြေပေးဖို့ တာ၀န်ရှိလာတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ အမြင်ကို ပြောပြပေးတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ insight တစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ မေးခွန်းကိုမေးတတ်မယ်ဆိုရင် ၀ယ်သူရဲ့ ငြင်းပယ်မှုကို ကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အရောင်းအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် စကားစုများ _အပိုင်း (၆)